Ahoana ny fomba hampangatsiahana haingana ny fiara amin'ny fahavaratra-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Ahoana ny fomba hampangatsiahana haingana ny fiara amin'ny fahavaratra
Rehefa tonga ny fahavaratra, dia tsy maintsy iharan'ny masoandro mahamay ny fiara, ary rehefa miditra ao anaty fiara ianao dia toy ny miditra sauna, ary toy ny mandro sauna. Mba hialana amin'ity henatra ity dia anio no hizarako anao fomba maro hampihena haingana ny mari-pana ao anaty fiara.
Fiaraha-miasa amin'ny fivezivezena anatiny sy ivelany
1. Vohay ny varavarana sy ny varavarankely, miandrasa 2-3 minitra vao reraka ny rivotra mafana, ary atombohy ny fiara;
2. Alefaso ny fivezivezena ivelany an'ny rivotra;
3. Rehefa mitovy ny mari-pana anatiny sy ivelan'ny efitrano, akatona ny varavarankely ary ampandehano ny fivezivezena anaty.
Ity fomba ity dia matetika ampiasaina, fa maharitra 5 minitra farafahakeliny hahatratrarana ny vokany. Na dia somary nafana kokoa aza io tamin'ny voalohany, dia misoroka ny enta-mavesatra be loatra rehefa manomboka ny motera, ary ny compressor-aircon dia afaka miditra haingana amin'ny toe-javatra miasa tsara indrindra.
Marihina fa raha ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra ny fivezivezena anaty dia hihena ny atin'ny oxygen ao anaty fiara ary hihena ao anaty fiara ny entona manimba toy ny gazy karbonika vokarin'ny fandoroan'ny motera tsy feno. . Noho izany dia ilaina ny mifamadika amin'ny maody mivezivezy ivelany ara-potoana hamelana ny fiara Vaovao madio avy any ivelany.
Vohay sy akatona ny varavarana
1 Vohay ny varavarankelin'ny mpiara-manidina;
2. Vohay ny varavaran'ny seza mpamily;
3. Vohay sy akatona 5 ny varavaran'ny mpamily amin'ny hery ara-dalàna.
Nahita fomba iray tena tsotra sy mora ny profesora aerodinamika japoney iray mba hampihenana haingana ny mari-pana ao anaty fiara mihoatra ny 8 ° C. Ny fotokevitra dia ny mitsentsitra ny rivotra mangatsiaka ao anaty fiara amin'ny alàlan'ny varavarankely nosokafan'ny mpamily mpiara-miasa, ary avy eo mamoaka ny rivotra mafana mivoaka ny fiara amin'ny alàlan'ny fanokafana sy fanidiana ny varavaran'ny seza mpamily.
Mila hery ara-dalàna fotsiny ny famohana sy ny fanidiana ny varavarana, ary ny isan'ny fotoana fanokafana sy fanidiana dia tsy maintsy mihoatra ny in-5 mba hahatratrarana ny vokany. Tsotra be io fomba io, ary miharihary ny vokany mangatsiaka.
1. Amboary ny vahaolana amin'ny tahan'ny rano sy alikaola 10: 1;
2. Aorian'ny fanokafana ny varavarana dia ahodino eo am-baravarankely ary esory ao anaty fiara ny vahaolana.
Ny fifantohana amin'ny alikaola dia tsy tokony ho avo loatra, ary ny habetsaky ny famafazana dia tsy tokony ho lehibe loatra, raha tsy izany dia hisy ny loza mety hitranga amin'ny fiarovana. Mandritra izany fotoana izany, sokafy ny varavarankely ary ampodiho ambony ny fivoahan'ny rivotra rehefa novohana ny rivotra. Satria mavesatra noho ny rivotra mafana ny rivotra mangatsiaka dia hilentika ho azy izy io. Ambonin'izany, ny alikaola dia miova be, ary ny volatilization dia endothermic.
Fiomanana rehefa mijanona
1. Miezaha mametraka ny fiara amin'ny toerana mangatsiaka, raha tsy misy hazo dia tsara kokoa ny miatrika ny masoandro rehefa miatrika ny masoandro, mba hampihena ny fiposahan'ny masoandro araka izay tratra.
2. Ny fampiasana ny fepetra aloaky ny masoandro dia tsy vitan'ny misoroka ny mari-pana ao anaty fiara tsy hiakatra haingana loatra, fa manakana ny fitaovana ao anaty fiara tsy hihantitra noho ny fiposahan'ny masoandro mivantana.
Previous: Famantarana 7 alohan'ny fiara simba
Next: Ahoana ny fomba hamantarana ny lesoka amin'ny fiara amin'ny tabataban'ny fiara